U adeegsiga Dekedda Berbera dagaalka Yemen - BBC Somali
U adeegsiga Dekedda Berbera dagaalka Yemen
31 Maarso 2015
Dowladda Federaalka Soomaaliya, ayaa war saxaafadeed ay soo saartay ku sheegtay in ay Taageerayso Yemen dagaalada ay kala soo horjeeddo kooxaha fallagada ee doonaya inay khalkhal galiyaan amniga iyo nabadgalyada iyo xasiloonida, Soomaaliyana ay diyaar u tahay inay ku taageerto wax kasta oo suurta gal ah.
Taageeridaas ayaa meelaha qaar looga macneeyay in ay ku jirto adeegsiga badaha iyo hawada Soomaaliya. Dadka arrimaha ka faaloodaana waxay leeyihiin goobaha laga hadlayo waxaa ka mid ah dekedda Berbera,laakinse waxaa taas ku gacan-sayray wasiirka arrimaha gudaha SL Ali M Warancadde oo sheegay in SL oo kali ah ay leedahay go'aanka Berbera ee aanay ahayn mid taal dawlkadda federalka somalia.
Weriyaha BBC ee Hargeysa Axmed saciid Cige ayaa waydiiyay Waran-cadde waa ti m/weyne Siilaanyo taageeray xulufada uu hogaaminayo Sacuudigu e ma jirtaa cid idinkala soo xiriirtay adeegsiga dekedaha iyo garoomadooda diyaaradaha?
Maqal Shir ku saabsan ka hotagga gudniinka fircooniga oo lagu soo gabagabeeyay Puntland
Shir ku saabsan ka hotagga gudniinka fircooniga oo lagu soo gabagabeeyay Puntland